नारायणगोपाल चोकमा पारस शाहकाे तमासा (भिडियाे) – Pahilo Page
नारायणगोपाल चोकमा पारस शाहकाे तमासा (भिडियाे)
१६ श्रावण २०७८, शनिबार ०६:३७ 332 पटक हेरिएको
काठमाडौं । पूर्वयुवराज पारस शाहले प्रहरीमाथि फेरि अभद्र व्यवहार गरेका छन् । शाहले हिंजाे साँझ महाराजगञ्जस्थित नारायणगोपाल चोकमा प्रहरीलाई अभद्र व्यवहार गरेका हुन्। हेल्मेट प्रयोग नगरी मोटरसाइकल चलाइरहेका बेला ट्राफिक प्रहरीले रोकेपछि उनी झगडामै उत्रिएका थिए।
हेल्मेट नलगाइ मोटरसाइकल चलाउनेमध्येका धेरैले प्रहरीसँग गल्ती स्वीकार गरेपनि पारस शाह भने उल्टै वादविवादमा उत्रिएकाे ट्राफिक महाशाखाको भनाइ छ।
पूर्वयुवराज शाह अधिकांश ठाउँमा उनले चलाउने गरेको मोटरसाइकलमा हेल्मेटबेगरै देखिने गरेका छन्। उनले त्यहाँ पनि आफूले कहिल्यै हेल्मेट लगाएको देखेको छ ? कहीँ रोकेको छ मलाई ? भनेका थिए।
उनको हात अँठ्याएका प्रहरीले माथिल्लो निकायमा वाकीटकीमा खबर गरिरहेको भिडियाेमा देख्न सकिन्छ। वाकीटकीमा कुरा गर्दा प्रहरीले नशामा रहेको व्यक्तिलाई नियन्त्रणमा लिनुपर्ने र गाडी पठाउन जाहेर गरिरहेका देखिन्छन्।
शाहले भने आफूले ‘ड्रिङ्स गरेको छैन’ भनिरहेका थिए। पारसलाई चौकी नल्याइ बाटोमै छोड्नु भन्ने आदेशपछि उनलाई कुनै कारबाही नगरी छाडिएको बताइएकाे छ ।
वादविवादकै क्रममा प्रहरीले छोडेपछि पारसलाइ मोटरसाइकलमा हेल्मेटबेगरै उनी हुइँकिएका थिए। महानगरीय प्रहरी कार्यालय रानीपोखरीका प्रमुख प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) हरि पालले गल्ती स्वीकार गरी माफी मागेपछि पारस र उनका समर्थकलाई छाडिएको बताएका छन।
पारस शाहले पारेको लफडा। भिडियो : सामाजिक सञ्जाल pic.twitter.com/auCKM0g0Sl
— khemraj thapa (@khemrajt) July 30, 2021